Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » किन लाग्छ मेलम्चीको पानी सबै धारामा पुर्‍याउन सात महिना ?
किन लाग्छ मेलम्चीको पानी सबै धारामा पुर्‍याउन सात महिना ?
२०७७ चैत १७ गते मङ्गलबार ०७:४१
आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु गरिएको मेलम्चीको पानी सबै धारामा पुर्‍याउन सात महिना लाग्ने भएको छ । केही स्थानमा परीक्षणका रूपमा मात्र नयाँ प्रणालीबाट मात्र वितरण भइरहेको छ । अनामनगर क्षेत्रमा पहिलो दिन नयाँ प्रणालीबाट...
आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु गरिएको मेलम्चीको पानी सबै धारामा पुर्‍याउन सात महिना लाग्ने भएको छ । केही स्थानमा परीक्षणका रूपमा मात्र नयाँ प्रणालीबाट मात्र वितरण भइरहेको छ । अनामनगर क्षेत्रमा पहिलो दिन नयाँ प्रणालीबाट ५ सय २२ घरमा चौबीसै घण्टा पानी दिइएको मेलम्ची उपआयोजना–२ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक कमलराज श्रेष्ठ बताउँछन्।
सोमबार बबरमहलदेखि उत्तर र पुरातत्त्व विभागको दक्षिणतर्फको धोबीखोलासम्म २ सय घरमा चौबीसै घण्टा आउने गरी पानी छाडिएको थियो। पानी आएपछि उत्साहित स्थानीय कतै पाइप लिकेज देखिए तिनको मर्मतसम्भारमा जुटेको उनको भनाइ छ । अहिले २ सय २० किमि क्षेत्रको पाइपमा परीक्षणको काम भएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रकाशित मिति १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:४१